Imizila ephezulu yeposi, iLamp Post Top, I-Posted Post Post Fixtures Abavelisi kunye nabathengi baseChina
Inkcazo:Iimpawu eziphezulu zePost,Iposti yePapu ephezulu,UkuLungiswa kweZithuba eziPhambili,I-Sun Lamp Post Top,,
Home > Imveliso > Imibala Ephezulu > Iimpawu eziphezulu ze-Post Post
Iintlobo zeMveliso ze- Iimpawu eziphezulu ze-Post Post , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Iimpawu eziphezulu zePost , Iposti yePapu ephezulu ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukuhlanjwa kwegadi yokukhanya kwe-30W kweFlorida Dubai 5000k  Qhagamshelana Ngoku
Uhlolo lwe-50W lwegadi yokuKhanya 240V 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-30W yeGadi yokuKhangela emva kokuBekwa kweeBhule kwiPole  Qhagamshelana Ngoku
Ukukhanya kwegadi kunye neNtshukumo yeSensor yokuthengisa 50W  Qhagamshelana Ngoku
Ukulungiswa kokukhanya kwegadi ye-30W 3900LM  Qhagamshelana Ngoku
50W iGadi yokuKhanyisa Post 65000LM 4000K  Qhagamshelana Ngoku
Iingcamango zokukhanya kwegadi ezingama-30W 39000LM 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-50W Izibane zeGadi eziKhanyisiweyo 6500LM  Qhagamshelana Ngoku
Iibhalbhu eziKhanyayo zeGadi eziNgaphandle 30W 39000LM  Qhagamshelana Ngoku
I-ETL DLC iholele ukukhanya okuphezulu kwe-30W  Qhagamshelana Ngoku
iholele ukukhanya okuphezulu kwe-30W yokubhukuda  Qhagamshelana Ngoku
150w ukukhanya kwendawo yarddi  Qhagamshelana Ngoku
I-5000K 277VAC 150W I-LED yeSetyhula Indawo  Qhagamshelana Ngoku
Iimpawu eziphezulu zangaphandle zePost 150W  Qhagamshelana Ngoku
I-150W Indawo yokuLawulwa kweziThamo eziPhakamileyo  Qhagamshelana Ngoku
50W 6500lm Ulwaphulo lokubhukuda  Qhagamshelana Ngoku
I-100W iholele ukukhanya okuphezulu kwithuba lokubhukuda  Qhagamshelana Ngoku
I-Quality High DLC ye-100W ikhokelela ukulungiswa kwesithuba esiphambili  Qhagamshelana Ngoku
Usuku lwe-Daywhite 5000K 100W lukhokelela kwindawo ephezulu yokukhanya  Qhagamshelana Ngoku
I-Pole Iphakame i-100W LED Post Top Area ukukhanya  Qhagamshelana Ngoku
IP65 75W Iimpawu eziPhambili zeeNdlela zeNdlela  Qhagamshelana Ngoku
Ukuhlanjwa kwegadi yokukhanya kwe-30W kweFlorida Dubai 5000k
Ukunyuka kwegadi yethu engu-30w ukukhanya kweFlorida eFlorida kuxhasa ukulingana kwe-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, le Gadi Khanya Dubai Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane aphezulu ngoku, xa kuthelekiswa ne-100W...
Uhlolo lwe-50W lwegadi yokuKhanya 240V 5000K
Ukukhanya kwegadi yethu engama-50w Ukunyusa ipali kuxhasa ukulingana i-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, olu Phononongo lokuKhanya kweGadi Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane okwangoku, xa kuthelekiswa ne-200W zebhalbhu...
I-30W yeGadi yokuKhangela emva kokuBekwa kweeBhule kwiPole
Indawo yethu yokufaka ukukhanya kwegadi yokukhanya kwegadi engama-30w kuxhasa ulungelelwano lwe-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, oku kukukhanya kweGadi kwiPole Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane aphezulu ngoku, xa...
Ukukhanya kwegadi kunye neNtshukumo yeSensor yokuthengisa 50W
Isensor yethu engu-50w yegadi yokuKhanya eshukumayo Ukunyusa ipali kuxhasa ukulingana i-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, oku kukhanya kweGadi kuyathengiswa Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane okwangoku, xa kuthelekiswa...
Ukulungiswa kokukhanya kwegadi ye-30W 3900LM
Ukunyuka kwethu kwegadi ye-30w izibane kwi- pole pole ye- Amazon kuxhasa ukulingana kwe-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, le Pole Light Pole Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane aphezulu ngoku, xa kuthelekiswa ne-100W...
50W iGadi yokuKhanyisa Post 65000LM 4000K
Isithuba sethu sokuKhanya seGadi se-50w Ukunyusa ipali kuxhasa ukulingana i-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, le Gadi yeZibane iphantsi Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane okwangoku, xa kuthelekiswa ne-200W zebhalbhu...
Iingcamango zokukhanya kwegadi ezingama-30W 39000LM 5000K
Indawo yethu yokukhwela igadi ye-30w yokuKhanya kweNdawo ye-30w ukuxhasa ilingana ne-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, le Gadi yokukhanya kweAtlanta Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane aphezulu ngoku, xa kuthelekiswa...
I-50W Izibane zeGadi eziKhanyisiweyo 6500LM
I-50w yethu iKhanyisiwe yeGadi yaseAmazon Ukunyusa ipali kuxhasa ukulingana i-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, le mihlobiso yeLed Light Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane okwangoku, xa kuthelekiswa ne-200W zebhalbhu...
Iibhalbhu eziKhanyayo zeGadi eziNgaphandle 30W 39000LM
Isibane sethu esingu-30w esikhanyiselwe iGadi yangaphakathi Ukunyusa ipali kuxhasa ukulingana i-2 3/8-intshi ye-OD tenon kunye ne-3 intshi. Ngaphandle koko, oku kukhanya kweZibane eziKhanya Inkxaso ye-AC100-277V yamandla ombane aphezulu ngoku, xa...
I-ETL DLC iholele ukukhanya okuphezulu kwe-30W
I-ETL DLC iholele ukukhanya okuphezulu kwe-30W 1. I- 30W yeDLC yokukhanya Ukugcinwa kwamandla, ubume bemeko, akukho mibala ye-UV okanye ye-IR. 2. kukhokelela ekukhanyeni okuphezulu kwe-30w Ukuxhatshazwa, ukuchasana nomswakama, akukho ukukhanya,...
iholele ukukhanya okuphezulu kwe-30W yokubhukuda
iholele ukukhanya okuphezulu kwe-30W yokubhukuda 1. I- 30W ikhokelela ukukhanya kwePost Top Ukugcina amandla, ukusingqongileyo, ukungabikho kwimibala ye-UV okanye ye-IR. 2. Ukukhokelela kwindawo ephezulu ye- Pole Ukukhwankqiswa, ukuchithwa kwamanzi,...
150w ukukhanya kwendawo yarddi
150w ukukhanya kwendawo yarddi 1. 15 0W ikhokelela ukukhanya kwePost Top Ukugcina amandla, ukusingqongileyo, ukungabikho kwemvelo, akukho mibala ye-UV okanye ye-IR. 2. iholele indawo ephezulu ye-150W Ukuxhatshazwa, ukuchasana nomswakama, akukho...
I-5000K 277VAC 150W I-LED yeSetyhula Indawo
I-5000K 277VAC 150W I-LED yeSetyhula Indawo 1. 15 0W ikhokelela ukukhanya kwePost Top Ukugcina amandla, ukusingqongileyo, ukungabikho kwemvelo, akukho mibala ye-UV okanye ye-IR. 2. iholele indawo ephezulu ye-150W Ukuxhatshazwa, ukuchasana...
Iimpawu eziphezulu zangaphandle zePost 150W
Iimpawu eziphezulu zangaphandle zePost 150W 1. 15 0W ikhokelela ukukhanya kwePost Top Ukugcina amandla, ukusingqongileyo, ukungabikho kwemvelo, akukho mibala ye-UV okanye ye-IR. 2. iholele indawo ephezulu ye-150W Ukuxhatshazwa, ukuchasana...
I-150W Indawo yokuLawulwa kweziThamo eziPhakamileyo
I-150W Indawo yokuLawulwa kweziThamo eziPhakamileyo 1. 15 0W ikhokelela ukukhanya kwePost Top Ukugcina amandla, ukusingqongileyo, ukungabikho kwemvelo, akukho mibala ye-UV okanye ye-IR. 2. iholele indawo ephezulu ye-150W Ukuxhatshazwa, ukuchasana...
50W 6500lm Ulwaphulo lokubhukuda
50W 6500lm Ulwaphulo lokubhukuda 1. I- Led ukukhanya ukukhanya ukukhanya 50W 6500lm Ukugcinwa kwamandla, ubume bemeko, akukho mibala ye-UV okanye ye-IR. 2. Ukukhanya okukhanyisiweyo 6500lm Idiza lokubhukuda Ukuxhatshazwa, ukuchasana nomswakama,...
I-100W iholele ukukhanya okuphezulu kwithuba lokubhukuda
I-100W iholele ukukhanya okuphezulu kwithuba lokubhukuda 1. 10 0W kwakhokelela ukonga Post Top ukukhanya Energy, zokusingqongileyo lobuhlobo, Akukho UV okanye i-IR radiation. 2. iholele indawo ephezulu ye-100W Ukuxhatshazwa, ukuchasana nomswakama,...
I-Quality High DLC ye-100W ikhokelela ukulungiswa kwesithuba esiphambili
I-Quality High DLC ye-100W ikhokelela ukulungiswa kwesithuba esiphambili 1. 10 0W kwakhokelela ukonga Post Top ukukhanya Energy, zokusingqongileyo lobuhlobo, Akukho UV okanye i-IR radiation. 2. iholele indawo ephezulu ye-100W Ukuxhatshazwa,...
Usuku lwe-Daywhite 5000K 100W lukhokelela kwindawo ephezulu yokukhanya
Usuku lwe-Daywhite 5000K 100W lukhokelela kwindawo ephezulu yokukhanya 1. 10 0W kwakhokelela ukonga Post Top ukukhanya Energy, zokusingqongileyo lobuhlobo, Akukho UV okanye i-IR radiation. 2. Ukukhokelwa kwendawo yePolisi Ukukhwankqiswa, ukuchithwa...
I-Pole Iphakame i-100W LED Post Top Area ukukhanya
I-Pole Iphakame i-100W LED Post Top Area ukukhanya 1. 10 0W kwakhokelela ukonga Post Top ukukhanya Energy, zokusingqongileyo lobuhlobo, Akukho UV okanye i-IR radiation. 2. Ukukhokelwa kwendawo yePolisi Ukukhwankqiswa, ukuchithwa komswakama,...
IP65 75W Iimpawu eziPhambili zeeNdlela zeNdlela
IP65 75W Iimpawu eziPhambili zeeNdlela zeNdlela Iimbonakalo: 1. iholele uPost Top pole Ukukhanya kwamandla, ubume bendalo, akukho mibala ye-UV okanye ye-IR. 2. Ukukhokelwa kwendawo yePolisi Ukukhwankqiswa, ukuchithwa komswakama, ukungabikho khanya,...
KwiChina Iimpawu eziphezulu ze-Post Post Abaxhasi
Iimpawu eziphezulu ze-Post Post I-ETL i-DLC ekhethiwe.30W 50W 75W 100 Watt IP65 Post Top yiBollard Retrofit ye-LED yeSetyhula Street Light 5000K 130 i-lumen nge-watt (100-300W HID / HPS / MH / CFL Replacement) Usuku lwe-120 Ukwabiwa kweeDriki Ukukhanya kwe-backway yangasemva, Iposti yePost Post Isekela amandla angama-80% xa kuthelekiswa nezixhobo zokukhanyisa zendabuko .Le mihlaba emihle yeLed Post Post Fixtures ilungele ukufakela okutsha.Umkhiqizo wethu omtsha ukhokelela izibane eziphezulu zenze igadi yakho ibe yodwa.Izi ndawo eziManzi, Ubunzima kunye noBungqina, I-IP65 ihlawulwe ama-50,000 iiyure kunye ne-Waranti yesi-5.
Iimpawu eziphezulu zePost Iposti yePapu ephezulu UkuLungiswa kweZithuba eziPhambili I-Sun Lamp Post Top Iimpawu eziphezulu ze-Sun Post 25W